Spotify inowedzera kukura kwayo nekuuya kweApple Music | IPhone nhau
Vazhinji, kusanganisira ini, vakafunga kuti kuvhurwa kweApple Music nemitengo yayo kwaizorwadza zvakanyanya Spotify. Kunyangwe ichokwadi kuti Apple Music ine vanyoreri vanosvika mamirioni gumi nematatu, isu tinoona kuti Spotify haina kukuvara zvachose nekutangwa kweApple Music, muchokwadi ine vashandisi vakawanda kupfuura isati yatanga, kunyangwe ichidhura. Uye zvakaoma kuburitsa chigaro cheMambo, zvirinani muhupenyu chaihwo, kwete muMutambo weZigaro. Saka, Kukura kwaSpotify kwakawedzera mushure mekuuya kweAppel Music, kure nekuwedzera kuipa.
Chikwata che Reuters Akataura nemumwe weMutevedzeri weMutungamiri weSpotify, uyo panguva imwecheteyo ari mumwe wevashandi vekare vekambani, Jonathan Forster. Ivo vakaita nharo nezve mimhanzi yekushambadzira masevhisi uye kuti Apple yakapinda sei mumusika pasina yambiro. Inenge rinenge gore kubva kuvhurwa kweApple Music, uye inguva yekugadzira mukwende, ingave yakanaka kana yakaipa. Zvese zvinotaridzika zvakanaka paSpotify:
Zvakanaka kuti Apple inopinda mukutamba. Ivo pakupedzisira vakasimudzira huwandu hwevashandisi vanoshandisa aya marudzi emasevhisi. Izvo zvakanyanya kuomarara kuchengetedza indasitiri wega, neApple isu tine rubatsiro rwakawanda kupfuura kukwikwidza.
Kubva Apple Music yakaburitswa, isu takakura nekukurumidza uye tine vashandisi vakawanda kupfuura nakare kose.
Ichokwadi here, Apple inochinja chero musika wainopinda, uye iya yekutenderera mumhanzi yaisazove shoma, zvaive pachena. Isu tinoona kuti havasi vashandisi veIOS chete vaityairwa, asiwo vashandisi vemamwe mapuratifomu avo vakatakurwa neApple Music kushambadza, asi avo vakasarudza kushandisa zvinokwikwidza masevhisi, uye vakaenda kunomira vakananga kuSpotify, kunyangwe vaine mitengo yakakwira. .
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Spotify inomhanyisa kukura kwayo nekuuya kweApple Music
Ivo vakangokura nekuti kutenderera kwemimhanzi kwave kushambadzirwa, vanhu vazhinji vari kutanga kuiziva nekuishandisa.
Vakura nekuti paSpotify unogona kubhadhara Premmium kana iwe kugara nebasa rekutanga (kushambadzira, nezvimwewo) uye Apple Music inogona kunge isingadhuri asi haina chirongwa chemahara ...
Foxconn inogadzirira fekitori yeApple zvishandiso muIndia